Safidy fitsangatsanganana tsara indrindra eo anelanelan'ny Atlantic City, NJ sy NYC
Ny Atlantic City dia mirefy 127 kilaometatra atsimoandrefan'i Manhattan any Atsimon'i New Jersey.
Ny Atlantic City dia fitsidihana malaza avy any New York City . Raha mitsidika ny morontsiraka atsinanana ianao ary maniry ny hahatsara ny casinos ao Atlantic City, toeram-pivarotana fivarotana ary ny moron-dranomaso , dia mandiniha mandany andro iray hitsidihana an'io toeram-ponenana any South Jersey io.
Ho avy any New York City mankany Atlantic City, NJ dia misy safidy maromaro, maro amin'izy ireo no ho mora kokoa raha mandamina mialoha.
New York City mankany Atlantic City, NJ By Bus
Ny serivisy bus avy any New York City mankany Atlantic City dia safidy tsotra sy mora azo ho an'ny mpitsidika. Ny fitsangatsanganana dia tokony halaina roa na enina sy sasany ka hatramin'ny telo ora, saingy mety ho lava kokoa noho ny fifamoivoizana. Ny sampan-draharahan'ny "Lucky Streak" ao Greyhound dia miala avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Port Authority ary manolotra ny toeram-pitsaboana hafa any amin'ny toeram-pitsangatsanganana ao Atlantic City, ankoatra ny bus station Atlantic City. Raha miala amin'ny casino ianao, matetika ny mpanamory fiaramanidina dia mahazo "valiny maimaim-poana" hampiasaina amin'ny casino. Ny tapakilam-pivarotana mivezivezy ary azo ampiasaina hiverina any NYC raha tianao fa tsy amin'ny bisikileta manokana. Na dia mandeha be aza ny fiara fitateram-bahoaka, dia matetika feno ireo mpandeha mpifindra monina any Atlantic City, ny fiara fitaterana dia mety ho toy ny siramamy miaraka amin'ny fanenjehana olona marobe izay mety ho very tao amin'ny casino.
Greyhound - 18-20 isan'andro isan'andro, manomboka amin'ny $ 25 isaky ny mandeha
Mega Bus - 9-17 mandeha isan'andro, $ 25-36
NJ Transit (mijanona ao amin'ny renirano Toms alohan'ny AC) - 10-13 miala isan'andro, $ 39 na fitsangatsanganana ho an'ny $ 42 ao anatin'ny 10 andro
Pros: asa mora, matetika; mandeha mivantana any amin'ny casino
Tsia: fifamoivoizana, tsy dia mendrika loatra amin'ny fiaran-dalamby
New York City mankany Atlantic City, NJ By Car
Ny fitaterana avy any New York City mankany Atlantic City dia mora sy tsotra. Ny lalana dia mandeha mivantana eo amin'ny Park State Park ary ny fiara dia mora sy sarobidy any Atlantic City. Manao drafitra mandritra ny telo minitra ora fialan-tsasatra, na dia eo aza ny fijanonana sy ny fifamoivoizana (izay tena mavesatra indrindra mandritra ny fotoana fialan-tsasatra) dia hanampy amin'ny fotoana ankapobeny. Azonao atao ny manofa fiara any Manhattan, na dia sarotra aza ny vidin'ny seranam-piaramanidina.
Pros: tena sarobidy raha mandeha miaraka amin'ny vondrona, tsy misy fandaharam-potoana hifikirana amin'ny
Tsia: fifamoivoizana, fiara
New York City mankany Atlantic City, NJ By Helicopter
Raha manana vola handaniana ianao ary tsy misy fotoana handosirana, dia afaka manolotra helikoptera ianao mba hitondra anao any Atlantic City. Ny fotoana fandehanana avy any Manhattan mankany Atlantic City dia tokony ho 45 minitra ary ny sarintanin'ny chartera dia mitentina $ 3500 manerana an'izao tontolo izao / $ 4200 mandritra ny dia ary afaka manangona mpandeha enina. Helicopter Helvetra Heliotra, HeliNY, ary New York Helikoptera dia sasantsasany amin'ireo orinasan-tanànan'i NYC izay manolotra helicopter charters.
New York City mankany Atlantic City, NJ By Limo or Town Car
Ity iray ity dia safidy lehibe raha mandeha miaraka amin'ny vondrona ianao ary tsy te-hiatrika ny olana amin'ny fanofana fiara sy fiara (ary tsy afaka hividy helikoptera!) Manodidina ny New York City Car Services rehetra ity fangatahana ity, raha tianao ny olona iray handroaka anao ary hiandry ora vitsivitsy na te hijanona mandritra ny alina na mihoatra. Ny saran-danja dia miova arakaraka ny isan'ireo mpandeha sy ny drafitra, fa ny dia iray dia manomboka amin'ny $ 235 + ny tendron-dàlana sy ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana (amin'ny ora efatra amin'ny ora fiandrasana) dia tokony ho $ 430 + tip.
Pros: mahafinaritra, mahafinaritra, tsara ho an'ny vondrona
Tsindry: sarobidy ho an'ny tsirairay, fitohizan'ny fitohanana
New York City mankany Atlantic City, NJ By Train
Ny fitsangatsanganana mankany Atlantic City avy any New York City amin'ny fiaran-dalamby dia tsy mora tahaka ny tokony ho izy. Mila mankany Philadelphia ianao ary mandehana any amin'ny seranam-piaramanidin'ny New Jersey mankany Atlantic City. Dia handao anao any amin'ny gara any Atlantic City, izay eo amin'ny antsasakadiny kilaometatra ao amin'ny Boardwalk. Ny fiaran-dalambon'i Amtrak sy New Jersey dia miala ao Penn Station any Manhattan ka hatrany amin'ny 30th Street Station (mivantana eo amin'ny Amtrak; avy amin'ny Trenton amin'ny NJ Transit.) Ny fiarandalamby dia mandeha telo minitra fara-fahakeliny ary 45 minitra, saingy afaka ela kokoa arakaraka ny fandaharam-potoana. Afaka mividy tapakila mialoha amin'ny tranokalan'i Amtrak na olona ao amin'ny Penn Station ianao. Tsara ny manamarika fa nijanona ny tolotra fiarandalamby mivantana eo anelanelan'ny NYC sy Atlantic City amin'ny fiarandalamby ACES.
Pros: Tsara kokoa noho ilay bus, avilio ny fifamoivoizana
Tsindry: sarobidy (vidin'ny ~ $ 100, arakaraka ny lalana sy ny fotoana), dia maharitra ela
Diabe tany New York City sy Event Guide
Ny zavatra vaovao hatao any New York amin'ny 2018
JFK Kennedy Transportation: $ 15 mankany Brooklyn's Atlantic Avenue amin'ny Mass Transit
Greenwich Village-West Village Neighborhood Guide
Aiza no ahitantsika Krismasy mahagaga any Brooklyn?
New York City Weather & Events tamin'ny Aogositra
Mitaingina bisikileta any Afrika
Torolàlana ho an'ny trano fonenan'ny kandidà ho filoham-pirenena
Fitoerana Tsy Fantatrao Mety Hisy Oran'ny Tandrefana
Ny faran'ny herinandro any Puerto Rico: Fivarotana 3 andro
Zava-tsoa folo hahaizana momba ny drafitry ny volan'ny barazy
Ny vola ampiasaina any Shina dia antsoina hoe RMB na Renminbi
Fampidirana an'i South Bali
Ny zavatra voalohany tokony hataonao eto Madagasikara
Tsara indrindra amin'ny taona hitsidihana an'i Austin
Sary 13 marevaka amin'ny Festival Holi any Inde